Seasons Bakery Incharge | City Mart Holding Co., Ltd. ﻿
1.	ရေးဆွဲထားသော Scheduled များအတိုင်းဝန်းထမ်းများ၏ အလုပ်တက်ရောက်မှုအခြေအနေများ ၊ ခွင့်နှင့် နာရက်များကို စီမံဖြေရှင်းခြင်း နှင့် မကျေနပ်ချက်များတိုင်တန်းမှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း ၊ Welfare နှင့် Transportation များ စသည့်ဆောင်ရွက်ချက်များကိုနည်းစနစ်ကျန သေချာစွာဆောင်ရွက်ရန်။
2.	၀န်ထမ်းများ၏ ခွင့်နှင့် နာရက်များကို စီမံပေးရန်နှင့် ၀န်ထမ်းများမှ ခွင့်မတိုင်ခြင်း ၊ ခွင့်မပြုဘဲပျက်ကွက်ခြင်းများနှင့် အခြားသတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းနှင့် ချမှတ်ထားသော Policy ချိုးဖောက်သည့်ကိစ္စရပ်များ စသည်တို့ကို Business Manager သို့တင်ပြအစီရင်ခံရန်။
3.	မုန့်များမှန်ကန်စွာဖြင့် အချိန်မှန်နေရာမှန်ရောက်ရှိစေရန်နှင့်ဆိုင်တွင် ထုတ်လုပ်ရောင်းချသောမုန့်များအတွက်လိုအပ်သော Finished goods, Premix raw, F&P , Packing order များ Stock out မဖြစ်စေရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ပိုလျှံ၍လေလွင့်ခြင်းမရှိအောင်တာဝန်ယူရန်။
4.	ဆိုင်တွင်ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေသည့် မုန့်များကို သတ်မှတ်ထားသော အရည်အသွေးမှီအောင် ထုတ်လုပ်ပြီး လျော့နည်းဆုံးရှုံးမှု ၊ အလေအလွင့်ဖြစ်ပွားမှုလျော့နည်း အောင်ဆောင်ရွက်ရန်။
5.	နေ့စဉ် Daily Balance Sheet အားရေးဆွဲ၍ မှန်ကန်တိကျမှုရှိအောင် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရန်။
6.	မကျေနပ်ချက်များ Customer တိုင်တန်းမှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်။
7.	Daily Operation အတွက်လိုအပ်ချက်များကို အဆေင်ပြေချောမွေ့စေရန်အတွက် ပံ့ပိုးကူညီရန်။
•	ကွန်ပျူတာအသုံးပြုနိုင်သူ (Word, Excel)
•	POS System , Ordering System & Basics Account & Inventory အတွေ့အကြုံရှိရမည်။
•	အစားအစာနှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းများ၊ စားသောက်ဆိုင်များတွင် စီမံခန့်ခွဲမှုအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (6) လ သို့ (1) နှစ်ခန့်ရှိရမည်။
Work location No.1-11, Padonmar Stadium (East Wing), Bargayar Street,Sanchaung Township,Yangon.
Seasons Bakery Incharge Admin, Secretarial & PA Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon City Mart Holding Co., Ltd. Admin, Secretarial & PA jobs Admin, Secretarial & PA jobs Retail/Wholesale Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Bago Region 693 Days
Mandalay Region 788 Days